Electoral College Yosarudza Mutungamiri weAmerica
Izvi zvinotevera sarudzo dzekudoma vanhu vaizosarudza mutungmiri wenyika ava dzakaitwa nezvizvarwa zveAmerica muna Mbudzi mumatunhu ose enyika aizokwikwidza akamirira bato ravo.
Amai Thokozani Khupe Ve MDCT-T Vanoti Kukundwa KwaAmai Clinton Kwakada Kufanana Nekudyiwa Kwava Tsvangirai Muna 2008
Amai Thokozani Khupe mumwe wevatevedzeri wemutungamiri webato reMDC-T vanoti kukundwa kwakaita Amai Hillary Clinton musarudzo dzemuUSA kwakada kufanana nekukundwa kwaVaMorgan Tsvangirai muna 2008 apo vakawana mavhoti akawanda kukunda VaRobert Mugabe asi havana kuzotonga sezvo vasina kusvika pa50.1%.
VaWisbon Malaya Vopa Pfungwa Dzavo Pamusoro Pesarudzo Dzemu America
VaWisbon Malaya vanoti vakange vachitevera sarudzo dzemuAmerica dzichangobva kupera uye vakafara nemafambisirwo akaita sarudzo idzi. VaDonald Trump vemaRepublicans vakakunda Amai Hillary Clinton vemaDemocrats musarudzo idzi. Inzwayi hurukuro yakaitwa naPatricia Mudadigwa weStudio 7 naVaMalaya.
Chizvarwa cheZimbabwe VaTawanda Karombo Votaura Pamusoro Pesarudzo Dzemu America
Mumwe mugari wemu Harare VaTawanda Karombo vanoti vakafadzwa nemafambisirwo akaitwa sarudzo dzemu America. Sarudzo idzi dzakaitwa neChipiri apo VaDonald Trump vemaRepublicans vakakunda Amai Hillary Clinton vemaDemocrats. Onayi hurukuro yakaitwa naPatricia Mudadigwa weStudio 7 naVaKarombo.
VaObama, VaTrump Vodyidzana Mushure mekuKandirana Makobvu neMatete
VaObama vozvipira kubatsira vachangodomwa semutungamiri wenyika VaDonald Trump
Mumiriri weAmerica muZimbabwe VaHarry Thomas Votaura nezveSarudzo dzemuNyika Yavo
Mumiriri weAmerica muZimbabwe, VaHarry K Thomas Jnr vanoti kunyange hazvo vasingakwanise kuduzira hutongo hwaVaTrump, hurongwa hweAmerica mukutsigira Zimbabwe munyaya dzekodzero dzevanhu, kutsigira sarudzo dzakachena, nekutsigira munyaya dzezvehutano kuchaenderera mberi.
VaTrump Vokunda Amai Clinton Musarudzo dzeMutungamiri weNyika yeAmerica
VaDonald Trump vapinda munhoroondo yenyika yeAmerica apo vasarudzwa kuva mutungamiri wenyika yeAmerica wekutanga ange asiri mune zvematongerwo enyika akunda sarudzo.
Mutori weNhau weZimbabwe Independent VaElias Mambo Votaura neZvavari Kuona muSarudzo dzemuAmerica Mavari Kushanya
Mutori wenhau VaElias Mlambo vanoshandira bepanhau reZimbabwe Independent vari kuongororora sarudzo dzemuAmerica nevamwe vatori venhau kubva kune dzimwe nyika
Zvimwe Zvizvarwa zveZimbabwe Zvove neChekuita muSarudzo dzeAmerica
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica zvakwanisa kuvhota musarudzo dzekutsvaga mutungamiri wenyika wechimakumi mana neshanu.
Sachigaro weZimrights Votaura Nezvesarudzo DzemuAmerica
Sachigaro weZimrights VaPassmore Nyakureba votaura nezvesarudzo dzemuAmerica. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika VaVivid Gwede vopa pfungwa dzavo nezvesarudzo dzemutungamiri wenyika dza2016. Nyaya ina Irwin Chifera.
Mifananidzo yeVanhu Vachivhota muAmerica
Mifanidzo yevanhu vemuAmerica vachivhota musarudzo dzemutungamiri wenyika dza2016.
Nhoroondo yeHupenyu hwaVaDonald Trump Yotariswa
VaTrump vakaberekerwa kuQueens kuNew York, vakakurira mumhuri ine hupfumi yaitungamirwa nababa vavo vaive nemabhizimusi aiita zvezvivakwa, VaFred, avo vavanoti vakavavhurira nzira.